Casharkan waxaa ku jira waxyaabo aad ku kalsoonaan kartid. Waxaa qorey dhakhaatiirta cilmu-nafsiga, dhakhaatiirta cilminafsiga carruurta iyo xirfadleyaal kale oo caafimaad ah oo ka tirsan kooxda Solihull Approach team. Sidoo kale waxaa la gudoonsiiyay astaamaha tayada waalidnimada (CANparent Quality Mark) ee Dowlada UK.
Waxaa jira 11 qaybood oo qaata qiyaastii 20 daqiiqo midkiiba in la dhammaystiro. Waxaa jira waxqabadyo isdhaxgal ah, su'aalo, iyo Muuqaalo yar yar oo caawiya wax barashada.
1. Sida ilmahaagu u korayo
Maxay ku saabsan tahay?
Buuggaaga xusuus qorka
La kulanka waalidiinta Khadka ku jira
1.1 Muxuu Solihull Approach kaga duwan yahay kuwa kale?
1.2 Wakhti xaadirkan, sided u aragtaa waalidnimada (barbaarinta caruurtra)
1.3 Dareenkaaga ku aadan waalidnimo muxuu yahay
1.4 Maxaad dareentaa waalid ahaan maalinta xun
1.5 Waxbadan inaan ogaano
1.6 Horumarinta xidhiidhka adiga iyo ilmahaaga idiinka dheexeya
1.7 Sida Masxadu ay u kobacdo
1.8 Muqaal: waayo-aragnimadu waxay dhistaa qaab-dhismeedka maskaxda
1.9 Maskaxda Koraysa: waxay micnaheedu tahay
1.10 Muhiimada Kobaca maskxada ee Hore
1.11 Muqaal: xidhiidhka u adeeg iyo ka jawaab celi sida ay u qaabeyaan xidhmooyiinka maskaxda
1.12 Maxaa kale oo saameeya kobaca maskaxda?
1.13 Saameynta murugada heerka sare ah (badan)
1.14 Waayo-aragnimada caruurta ayaa qaabeysa hab-dhaqanka
1.15 Kobaca maskaxada ee dhacay caruurnimada
1.16 Kobaca maskaxda ee kurayga (Qaan-gaadhka)
1.17 Sida maskaxdailmaha Qaan-gaadhka ah (kurayaga) ay u korto
1.18 Kobaca maskaxda ee ilmaha Qaan-Gaadhka ah (kurayaga)
1.19 Waxaad baratay
1.20 Waxyaabaha aad jeceshahay inaad badasho
1.21 Wakhtigi la tagi lahaa!
1.22 Dhammaadki modulka
2. Ilmahaagu wuxuu dareemayo oo aad fahanto
2.1 Soo noqod wacan!
2.2 Jawaab celin intaan bilaabin ka hore
2.3 Maxaa soo socda
2.4 Side baan u garan karnaa inaan faraxsanahay
2.5 Side baan u garan karnaa markaan xanaaqsanahay
2.6 Side baan u garan karnaa inaan daalanahay
2.7 Side baan u garan karnaa markaan wareersanahay
2.8 Inaad fahanto markuu ilmahaagu faraxsan yahay
2.9 Side baad u garataa marku ilmahaagu xanaaqsan yahay
2.10 Inaad fahanto marku ilmahaagu dareemayo daal
2.11 Inaad fahanto marka ilmaahaagu wareersan yahay
2.12 Akhrinta hab-dhaqanka (dabeecada)
2.13 Tusaalooyinka waalidiinta kale
2.14 Akhrinta hab-dhaqanka ilmahaaga markuu ku jiro xaaladahan
2.15 Sida hab-dhaqankeenu (dabeecadeenu) u saameyso caruurteena
2.16 Waxyaabaha kale ee ay tahay in lagu xisaabtamo
2.17 Caqabadah aad la kulmi karto markaad akhrinayso hab-dhaqanada (dabeecadaha)
2.18 Wakhtigi laga Gudbayey!
2.19 Modulkaan dhexdiis, waxaad ka baratay
2.20 Saddexda su’aalood ee ugu muhiimsan
2.21 Dhammaadka modulka
3. Waxa ilmahaagu u baahan yahay oo aad u fiirsato
3.1 Soo noqod wacan!
3.2 Anagoo Dib u jaleecayna modulki ugu danbeeyay
3.3 Fikirkaaga oo aad ka dhiibato dhammaadki modulka!
3.4 Maxaa soo socda
3.5 La socodka waxyaabaha u ilmahaagu u baahan yahay
3.6 Kobaca maskaxda caruurta
3.7 Sameynta isku xidhka maskaxda
3.8 Ka baaran dagida kobaca maskxada ilmahaaga
3.9 Caruurtaada oo aad ka caawiso barashada xirfado cusub
3.10 Maxaa lagaaga baahan yahay si aad u barato xirfadaha cusub
3.11 Dhib walba labo waji ayay leedahay
3.12 Fahanka darajooyiinka Koriinka (kobaca)
3.13 Maxaad sameyn lahayd?
3.14 Waxaad baratay
3.15 Wakhtigi laga gudbayey!
3.16 Dhammaadka modulka
4. Sida ilmahaagu dareemayo oo aad jawaab celin ka bixiso
4.1 Soo noqod wacan!
4.2 U Fiirsashada ay sameyeen waalidiinta kale qaarkood
4.3Fikirkaaga ka dhiibo modulka ugu danbeeyay
4.4 Fikir ka dhiibo wakhtigi Dhamaadka!
4.5 Maxaa soo socda
4.6 Xakameynta: waxyaabaha asaasiga ah
4.7 Xakameynta (Containment): wax dheeri ah ka baro
4.8 Xakameynta: waxbadan ka baro
4.9 Maxaa dhici kara marku walwal noo gaar ah jiro
4.10 Saamaynta ay tani ku leedahay ilmaha
4.11 Goob inaad uga sameyso maskaxdaada
4.12 Sidee dareenka la isugu gudbiyaa
4.13 Dareenka asaaska u ah
4.14 Wax u qabashada si ka duwan
4.15 Anigo Ka fikiraya sida aan wax u dhahno
4.16 Si kala duwan wax u dheh
4.17 Horumarinta xiriir ka kooban
4.18 Maxaad ka baratay Qaybtan
4.19 Waqti aad ku baxdo!
4.20 Dhamaadka Moodul
5. Hababka kala duwan ee carruurta loo barbaarian karo (Waalidnimada)
5.1 Soo dhawow!
5.2 Fikir ka dhiibo moodulkai ugu danbeeyay
5.3 Fikir ka dhiibo dhamaadki moodulkaa!
5.4 Muraajacada badhtamaaha buugga
5.5 Dib u eeg isbadalkaaga
5.6 Maxaa soo socda
5.7 Nidaamyada loo barbaariyo caruurta (waalidnimada)
5.8 Maxaad jeceshahay inay caruurtaadu ka dhaxlaan
5.9 Nidaamyada loo koriyo caruurta (Waalidnimada)
5.10 Nidaamyada kala duwan ee loo barbaaariyo caruurta (waalidnimo) (Qaybta 1aad)
5.11 Nidaamyada kala duwan ee loo barbaaariyo caruurta (waalidnimo (Qaybta 2 aad)
5.12 Nidaamka caruurta loo koriyo ee Masuulka ah: Isku dhelitirnaanta oo aad saxdo
5.13 Waa wakhtigi laga gudbayey!
5.14 Dhamaadka Moodulkaa
6. Si Wadajir in loo baashaalo
6.1 Soo noqod wacan!
6.2 In dib looga fikiro moodulkai ugu danbeeyay
6.3 Anagoo fikir ka dhiibanayna dhamaadki moodulkaa!
6.4 Maxaa soo socdaa
6.5 Wax baro adigoo ciyaaraya
6.6 La ciyarka dadka waaaweyn oo wax laga barto
6.7 Sida ay caruurtu ciyaarta wax uga bartaan
6.8 Sida ay ciyaartu xidhiidhka waxtar badan ugu leedahay
6.9 Fikiro loogu tala galay ciyaarta
6.10 Siyaabaha kala duwan ee loo ciyaaro
6.11 Fiiro kale oo siday isku xig xigaan ciyaaruhu
6.12 Waxtarka balaadhan ee ciyaarta
6.13 Waxyaabihi aad baratay
6.14 Wakhtigi la gabagabeynayey Qaybti 1
6.15 Gabagabada Moodulkaan! Qaybta 2aad
6.16 Dhamaadka moodulkaa
7. Laxanka isdhexgalka
7.1 Soo noqod wacan!
7.2 Fikir ka dhiibo moodulkaaugu danbeeya
7.3 Aragtidaada ka dhiibo gabagabada moodulkaan!
7.4 Waxaa soo socda
7.5 Ciyaarta iswaafajinta: Aasaaska
7.6 Xidhiidhka ka dhexeeya dadka waaweyn
7.7 Xidhiidhka ka dhexeeya dadka waaweyn
7.8 Fahanka ciyaarta wax isdhaafsiga
7.9 7 da tallaabo ee qoob ka ciyaarka
7.10 Fahanka ficilada ilmaha
7.11 Ogaanshaha Qoob-ka-ciyaarka adiga iyo carruurtaada
7.12 Qoob-ka-ciyaarka: Qaar ka mid ah fiirsashada waalidiinta kale
7.13 Qoob-ka-ciyaarka nolol maalmeedka
7.14 Is-xakamaynta iyo Qoob-ka-ciyaarka
7.15 Iskuxirka dhismaha maskaxda
7.16 Maxaad ka baratay Qaybtan
7.17 Waa wakhtigi laga gudbayey!
7.18 Dhamaadka Moodulkaa
8. Hurdadu maxay muhiim u tahay?
8.1 Soo dhawow!
8.2 Isagoo milicsanaya Qeybtii ugu dambeysay
8.3 Quudinta dib ugu noqoshada Waqtiga si aad uhesho!
8.4 Qodobbada barashada muhiimka ah ee Waqtiga si aad uhesho!
8.5 Maxaa soo socda
8.6 Hababka hurdada ee wanaagsan: Aasaaska
8.7 Kala soocista ilmaha
8.8 Ka gudubka dhibaatooyinka kala tagga
8.9 Sababaha guud ee hurdo xumida
8.10 Maxaan ugu baahanahay inaan seexano?
8.11 Maxaa inaga caawiya inaan seexano
8.12 Dhibaatooyinka hurdada
8.13 Haysashada jadwal aad seexato
8.14 Maxaad ka baratay Qaybtan
8.15 Waqti aad ku baxdo!
8.16 Dhamaadka Module
9. Is-Xakamaynta iyo Cadhada
9.1 Soo dhawow!
9.2 Isagoo milicsanaya Qeybtii ugu dambeysay
9.3 Fikir ka dhiibo dhamaadka moodulkaan!
9.4 Maxaa soo socda
9.5 Cadho iyo madaxbanaani
9.6 Laqabsiga cadhada
9.7 Inaad u aragto xanaaqa qaab kale
9.8 Goorma ayey xanaaqa waxtar yeelan karaa?
9.9 Waa maxay noocyada waxyaalaha ilmaha ka xanaajin kara?
9.10 Sida loo caawiyo cunug dareensan xanaaq
9.11 Barashada xakameynta shucuurta
9.12 Caawinta cunugaada inuu barto sida loo maareeyo carada
9.13 Cadho iyo madax banaani
9.14 Tusaalooyinka la dhaqanka carruurta
9.15 Milicsiga waxa aad hadda aragtay
9.16 Habab kale oo aad qaadan karto
9.17 Imtixaanka marshmallow
9.18 Maxaad ka baratay Qaybtan
9.19 Waqti aad ku baxdo!
9.20 Dhammaadka moodulka
10. Wada hadalka iyo ka warhaynta
10.1 Soo dhawow!
10.2 Isagoo milicsanaya Qeybtii ugu dambeysay
10.3 Fikir ka dhiibo dhamaadka moodulkaan!
10.4 Qaar ka mid ah fiirsashada waalidiinta kale
10.5 Maxaa soo socda
10.6 Qoob ka ciyaarka isweydaarsiga: muraajaco
10.7 Sidee looga bogsadaa markay wax khaldamaan: kala Go’a iyo wanaajinta
10.8 Tusaalaha kala go’a
10.9 Xagee wax ka khaldameen?
10.10 Sidee xaaladda loo hagaajin karaa: Hagaajinta
10.11 Muxuu kaga duwanaa isku xigxigaas?
10.12 Hagaajinta xaalada
10.13 Wanaajinta cilaaqaadka
10.14 Maxaa dhacaya khilaaf kadib
10.15 Ahmiyada ay leedahay raali galinta
10.16 Qaar ka mid ah fiirsashada waalidiinta kale
10.17 Ka caawinta ilmahaaga inuu barto isku dhaca iyo hagaajinta
10.18 Qaar ka mid ah fiirsashada waalidiinta kale
10.19 Waqti aad ku baxdo!
10.20 Dhamaadka Moodulka
11. Aan dib u milicsanayno oo aan horay u sii fiirinayno
11.1 Soo dhawow!
11.2 Isagoo milicsanaya Qeybtii ugu dambeysay
11.3 Fikir ka dhiibo dhamaadka moodulkaan!
11.4 Qaar ka mid ah fiirsashada waalidka kale
11.5 Maxaa soo socda
11.6 Maxaad ku guuleysatay inaad beddesho?
11.7 Wakhtiga Imtixaanka Kediska
11.8 Wax u qabashada si ka duwan
11.9 Soo koobida Kheyraadka
11.10 Kheyraad dheeri ah
11.11 Su’aalo-weydiinta koorsada kadib
11.12 Mahadsanid Solihull
11.13 Dhamaadka koorsadan: sii wadida safarkaaga